कोरोनाबाट प्रभावित १५ हजार घरधुरीलाई राहत बाँड्दैछौंः मेयर दाहाल - Everest Dainik - News from Nepal
कोरोनाबाट प्रभावित १५ हजार घरधुरीलाई राहत बाँड्दैछौंः मेयर दाहाल
२०७६, २८ चैत्र शुक्रबार
चितवनः भरतपुर महानगरले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन उच्चसतर्कता अपनाएको छ । ७० शैयाको कोरोना विशेष (अस्थायी) अस्पताल ३ दिनमै तयार पार्याे । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण भएको चितवन प्रदर्शनी केन्द्रमा बनेको यो अस्पतालले चैत ७ गतेदेखि सुरु गर्याे । २६ गतेसम्म यहाँ कोरोना शंका लागेका ३ सय २१ जनाले उपचार पाए । जसमध्ये १ सय १० जना भर्ना भए । बुधबारसम्म १२० जनाको नमुना परीक्षण गर्दा कोभिड–१९ को संक्रमण कुनैमा देखिएन ।
यो अस्पतालबाट नमुना परीक्षणका लागि बिरामीको स्वाब काठमाडौँ वा हेटौंडा पठाउनुपर्ने अवस्था थियो । कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको ‘राष्ट्रिय पंछी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला’ मा महानगरकै पहलमा ‘कोभिड–१९ परीक्षण प्रयोगशाला’ स्थापना गरियो । २३ गतेदेखि सुरु भएको यो प्रयोगशालामा २६ गतेसम्म ४५ नमुना परीक्षण भए । कुनैमा पनि संक्रमण भेटिएन ।
भरतपुरको पहिचान ‘मेडिकल सिटी’ पनि हो । क्यान्सर अस्पताल, केन्द्रीयस्तरको भरतपुर अस्पताल, २ ठूला मेडिकल कजेल, दर्जनौँ निजी अस्पताल छन् । भरतपुरमा करिब १५ जिल्लाका बिरामी उपचारका लागि आउने ठाउँ पनि हो । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिने उपायमध्ये बेलैमा संक्रमण पहिचान गर्नु पनि हो । स्थानीय सरकारलाई यो बेला काम गर्न सहज छ त ? भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेनु दाहालसँग विप्लव काफ्लेले गरेको कुराकानी :
कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि भरतपुर महानगरले के गरिरहेको छ ?
भरतपुर कोरोना नियन्त्रण कार्यदल चैत ४ गते नै गठन गरेर काम थालेका थियौँ । महानगर, राजनीतिक दल, अस्पतालका सञ्चालकसहितको कार्यदल छ । कार्यदलले काम गरिरहेको छ । कोरोना विशेष (अस्थायी) अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका छौं । राम्रो सेवा दिइरहेको छ । करिब ३ सय बढी कोरोनाको शंका लागेका रुघाखोकी, ज्वरोका बिरामीको उपचार भइसकेको छ । कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षणका लागि स्वाब लिने काम भइरहेकै छ । कोरोनाका लक्षण मिल्ने बिरामी अन्य अस्पताल जाँदा ती अस्पतालहरूले नलिने अवस्था थियो । त्यस्ता बिरामीको सहज उपचार भएको छ । सचेतनामूलक कार्यक्रम भइरहेको छ । किटनाशक औषधि सहर, बजार, केही गाउँका सडक आसपासमा छर्ने काम भएको छ । लकडाउनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनका लागि आह्वान गरिरहेका छौँ । पालना गरिरहनुभएको छ । ज्यालादारी मजदुर, श्रमिक, विपन्नलाई राहत बाँडिरहेका छौँ । करिब १५ हजार घरधुरीलाई राहत बाँड्ने योजना छ । यो हप्ताभित्र पहिलो चरणको राहत बाँडिसकिने छ ।
कोरोना अस्थायी अस्पताल बनाउने अवधारणा कसरी आयो ?
यो अस्पताल जन्माउन निकै मिहनेत गर्नुपर्याे । महानगरभित्रका स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखसहितको छलफलमा अस्थायी अस्पताल बनाउनेबारे कुराकानी भए । कोरोना भाइरस संक्रमण भएपछिका लक्षणका बिरामीको उपचार नै नगर्नेसम्म स्थिति आउने जोखिम थियो । ज्वरो आउने बित्तिकै तर्सिने स्थिति थियो ।
याे पनि पढ्नुस भरतपुर महानगरद्वारा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री तथा सेवन नियन्त्रणका लागि अनुगमन
अस्पताल सञ्चालक र चिकित्सककै समूह पनि कसरी संकट न्यूनीकरण गर्ने भन्नेबारेमा चिन्तित थिए । छुट्टै अस्पताल बनाउँ, लक्षण मिल्दो भएका बिरामीलाई छुट्टै उपचार गर्दा सुरक्षित होला भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ । संक्रमणबाट जोगिने त्यो राम्रो उपाय पनि थियो । महानगरले पहल थाल्यो । चितवन प्रदर्शनी केन्द्रको संरचना पर्याप्त हुने आँकलन गरेरै अस्थायी अस्पताल त्यही बनाउने काम अगाडि बढाइयो । कोरोना अस्थायी अस्पताल महानगरकै नेतृत्वमा स्थापना भएको छ । खर्च व्यवस्थापन महानगरले नै गरिरहेको छ । अस्थायी अस्पताल ७२ घण्टाभित्रै बनाइसक्ने भनेर अवधि तोकेरै दु्रत गतिमा अघि बढ्यौँ । सबैको साथ र सहयोग पायौँ । ७० बेडको अस्पताल तयार पनि भयो । राम्रो सेवा दिइरहेको छ ।
कोरोना भाइरसको आशंका भएका अधिकाँस बिरामीले यही अस्पतालबाट उपचार लिएको अवस्था छ । यसका लागि आवश्यक बेड, उपकरण, सामग्री जिल्लाकै अन्य अस्पताल र संघसंस्थाले सहयोग गरे । यहाँ कार्यरत चिकित्सकको मनोबल बढाउन हामी पनि लागेका छौँ । प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेका छौँ । तलबमा २५ प्रतिशत भत्ता दिन योजना छ । १ वर्षको ५० लाख बराबरको बिमा गरिदिँदैछौँ । अधिकतम १ सय जना स्वास्थ्यकर्मीको बिमा गर्ने योजना छ । खाना, बस्न सबैको व्यवस्था मिलाएका छौँ । गंगोत्री होटलमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई सहुलियत भाडामा राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । उपचारका लागि आउने बिरामीलाई पनि खानाको व्यवस्था गरेका छौँ ।
नमुना परीक्षण प्रयोगशाला बनिसकेपछि केही टीकाटिप्पणी पनि भए, केन्द्र सरकारले असहयोग गरेको थियो ?
धेरै मिहिनेत गर्नुपर्याे। बनिसकेपछि समेत सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी भयो भने नहुँदै कति गारो थियो होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । भरतपुरमा प्रयोगशाला बनाउने काम सुरु हुन लाग्यो भन्दा पनि रोक्न प्रयास भएका पनि होलान् । बनिसकेपछि त नकारात्मक टीकाटिप्पणी भए । हामीले प्रयास गर्दा कति अप्ठ्यारो परिस्थिति थियो होला भनेर आँकलन गर्न सकिन्छ । पहिलो चरणमै प्रयोगशाला भरतपुरमा हुनुपर्ने थियो । भरतपुर मेडिकल सिटी भनेर चिनिएको ठाउँ हो । विशेषज्ञ सेवा दिने अस्पताल छन् । कोरोनासम्बन्धी उपचार गर्ने अस्थायी अस्पताल नै बनेको अवस्था थियो । सबै पूर्वाधार हुँदासमेत छुट्यो ।
सुरुमै खबरदारी गरिरहेका थियौँ । तर प्रयोगशालाका लागि भरतपुर रोजाइमा परेन । कुनै पनि हालतमा बनाइनुपर्छ भनेर निरन्तर लाग्यौँ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना महाशाखा लगायतसँग निरन्तर संवाद भयो । मन्त्रालयको सहयोग पाएपछि बल्ल सहज भयो । प्रदेशका लागि प्रयोगशाला हेटौंडामा राख्ने निर्णय भएपछि त्योबला केही गाह्रो पक्कै थियो । तर, हेटौंडाबाट बिरामी भरतपुर ल्याएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था थियो । करिब १५ जिल्लाबाट बिरामी यहाँ आउँछन् । तर, नमुना परीक्षण गर्न हेटौडामा लैजानुपर्ने कुरा अन्तरविरोधजस्तो देखियो । व्यावहारिक थिएन । हेटौंडा भएकोमा आपत्ति होइन, तर आवश्यकता भरतपुर थियो ।
याे पनि पढ्नुस भरतपुर महानगरको पर्यटन स्तम्भ शिलान्यास
अवरोधका बाबजुत सफल भएका छौँ । दिनमा तीन सिफ्टमा नमुना परीक्षण गर्न सकिने अवस्था छ । हरेक सिफ्टमा ९० नमुना परीक्षण गर्न सकिने पूर्वाधार बनेको छ । काठमाडौंपछिको धेरै क्षमता भएको पीसीआर ल्याब यही हो । मन्त्रालयबाट केही उपकरण सहयोग आयो । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर, पंक्षीरोग अन्वेषण प्रयोगशालाका उपकरणसमेत जुटायौँ । कृषि मन्त्रालयले पनि सहयोग गर्याे । जटिलताका बीच ल्याब बनाउन सम्भव भयो ।
यो बेला प्रदेश र केन्द्र सरकारको सहयोग कस्तो छ ?
डर, त्रासको स्थिति छ । जनतालाई मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको अवस्था छ । सकेसम्म त्रास हटाउने खालका सचेतनामूलक गतिविधि गर्न जरुरी छ । हामीले गरिरहेका छौँ । स्थानीय सरकारले आफ्नो स्रोत, साधनले भ्याएसम्म गरिरहेका छौँ । केन्द्र सरकारबाट नीति नियमका कुरा भएका छन्, यो गर्ने–त्यो गर्ने भन्ने नीतिगत कुरा भएका छन् । तर, व्यावहारिक कुरा खासै भएको अवस्था छैन । राहत प्याकेज, प्रकोप नियन्त्रणका लागि ठोस–ठोस कार्यक्रम, अभियानका कार्यक्रमको अभाव छन् । ज्यालादारी, मजदुरी गर्ने, विपन्न परिवारलाई राहत प्याकेज केही पनि नभएको अवस्था छ । आर्थिक योजना पनि छैनन् । ढिला गर्न हुँदैन । केन्द्र सरकारको काम चित्त बुझ्दो छैन भन्न बाध्य छु । नीतिगत र आश्वासनका कुरा भए । तर, व्यावहारिक र कार्यान्वयनको कुरामा अलि फितलो देखिएको छ ।
केन्द्र सरकारले स्पष्ट योजना कार्यक्रम र सहयोग नबनाएको गुनासो हामीसमक्ष नआएका होइनन् । यो काम गरेर देखाउने बेला हो । नीतिगत कुरा र निर्देशन आएका छन् । तर, व्यावहारिक रूपमा काम गर्ने गरी सहयोग आएको अवस्था छैन । समयले हामीलाई पर्खिँदैन । ढिला गर्नु हुँदैन । केन्द्र सरकारमार्फत स्पष्ट खालका कार्यक्रम, योजना, नीति, निर्देशन र प्याकेजका कार्यक्रम आउन जरुरी छ । स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण पनि केन्द्रबाट पर्याप्त आएको अवस्था छैन । स्वास्थ्यकर्मी नै सुरक्षित नभएसम्म उ कसरी अगाडि बढ्छ ।
मेडिकल सिटीको उपमा पाएको भरतपुरका निजी अस्पतालले बिरामीको उपचार गर्न मानेनन् भन्ने गुनासो आउन थालेका छन् । यसबारे स्थानीय सरकार जानकार छ ?
हामी निरन्तर संवादमै छौँ । चिकित्सक तथा सञ्चालकहरूसँग छलफल गरेका छौँ । छुट्टै ‘फिवर क्लिनिक’ हुनुपर्छ । ज्वरो, रुघाखोकी लागेका बिरामी आउने बित्तिकै सरकारी अस्पताल वा कोरोना अस्थायी अस्पतालतिर पठाउने काम नगरौँ । फिवर क्लिनिकमा परीक्षण गर्दा शंका लागे मात्रै रिफर गर्न सुझाएका छौँ । ज्वरो आउँदैमा कोरोना लागेको हो कि भन्दै अझै पनि रिफर गर्ने गरेको अवस्था छ । कोरोना अस्थायी अस्पताल बेलैमा बनाइएकाले उपचारमा केही सहजता पक्कै भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस कोरोना विशेष अस्पतालको खर्च एक महिनामा सवा करोड रुपैयाँ
यो अस्पताल नबनाइएको भए बिरामी भागाभाग गर्नुपर्ने स्थिति आउने थियो कि भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । कुनै अस्पतालले उपचार गर्न मानेनन् भने स्थानीय प्रशासन वा स्थानीय सरकारलाई तत्काल खबर गर्न भनेका छौँ । अनुगमन समिति पनि छ । धेरै अस्पतालले फिवर क्लिनिक चलाएका छन् । यदी उपचार गर्न नमाने कानुनअनुसार कारबाहीका लागि पहल गर्नेछौँ । अस्पतालहरूले सकेसम्म बिरामी नलिने अवस्था नभएका होइनन् । अनुगमन अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
यो बेला अतिआवश्यक काम र सम्भावित प्रकोप न्यूनीकरणका लागि खर्च व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ ?
बागमती प्रदेशबाट कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि १ करोड बराबरको बजेट आएको छ । महानगरले आफ्नै स्रोत साधन पनि परिचालन गरिरहेको छ । राहत प्याकेजका लागि पनि २० लाख बजेट प्रदेशल दिएको छ । महानगरले पहिलो चरणको राहत बाँड्नका लागि ५० लाख खर्चिदैछ । तर, केन्द्रले केही बजेट दिएको अवस्था छ । केन्द्र सरकारले बजेट, उपकरणका कुरामा स्पष्ट सहयोग गरेको अवस्था भने छैन । महानगरले विपद् व्यवस्थापन कोषबाट पहिलो चरणको राहत वितरण पुरा गर्दैछौँ । छिटै बैठक बसेर चालू खर्च हुने तालिम, भ्रमणलगायतका सफ्टवेयरका कार्यक्रमको बजेट विपद् कोषमा रकमान्तर गर्ने योजना छ ।
राहत बाँड्न महानगर हतारिएको भन्ने आरोप छन् नि ?
हतारियो भन्ने पनि छन्, ढिलो गर्याे भन्ने पनि छन् । केन्द्र, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमार्फत राहत वितरण गर भनेर निर्देशन दिएकाले हामीले राहत बाँडिएको हो । विपन्न र ज्यालादारी मजदुरी गर्ने वर्ग समस्यामा परेको गुनासो बढी आएकैले राहत वडा तहबाट लगत लिएर बाँडिएको हो । गर्नैपर्ने काम हो किन ढिला गर्ने भनेर अगाडि बढेका हौँ । हतारिएको होइन, समयमा काम गरेका हौँ ।
महानगर तथा वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई सम्भावित प्रकोप नियन्त्रणका लागि कसरी परिचालन गरेका छौँ ?
महानगर, वडास्तरमा कमिटि बनाएका छौँ । राहत वितरण, जनचेतनालगायतका काममा खटिएका छन् । बाहिरी मुलुकबाट भित्रिने नेपालीको अभिलेख राख्ने काममा पनि परिचालन गरेका छौँ । होम वा छुट्टै क्वारेन्टाइनमा राख्ने, अस्पताल लैजाने व्यवस्था मिलाउने काममा समन्वय गरिरहेको अवस्था छ । वडास्तरबाटै सम्भावित बिरामी पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ । वडातहबाट एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत वितरणका लागि जनप्रनिधिलाई अगाडि सारेका छौँ । स्वास्थ्य चौकीमा समेत फिवर क्लिनिक राखेर चेकजाँचका काम भइरहेका छन् । काराेबार दैनिकबाट साभार
ट्याग्स: भरतपुर महानगरपालिका, रेनु दाहाल
मृतक युवतीको स्वाब पीसीआर परीक्षणका लागि पठाइयो
दलित हुनुको पीडा : बेहुला र बेहुली बन्न हिँडेका दुबैको गयो ज्यान !
नेपालमा थप ७ जनामा देखियो कोरोना
बझाङमा बाघको छालासहित १ जना पक्राउ
नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले एक वर्षको बैठक भत्ता नलिने
कोरोनाका बिरामीको पाटन अस्पतालमा हड्डीको अपरेशन गरियो
थप ४३ जना संक्रमित निको भए
कोरोना आशंका गरिएका मृतकको पिसिआर रिपोर्ट आयो
नेपालमा कोरोनाबाट चौथो व्यक्तिको मृत्यु भएको मन्त्रालयद्वारा पुष्टि
Oil edges past $33, but rising US tensions with China cap rally
Oil traded near $33abarrel as an escalating war of words between the U.S. and China added to caution over the prospects foraglobal recovery in demand. China warned on Sunday that some in the U.S. were pushing the countries towardanew Cold War, ...
Tim from Lino Lakes, MN. To all the current and former members of our armed forces, my sincerest appreciation, salute, and standing ovation. Thank you. Hope the holiday finds everyone safe and healthy. Dave from Waterford, WI. Do you think the Packers ...
SpaceX and NASA are ready to launch astronauts. Here's the 10-year journey it took to get here.
SpaceX's epic first crewed launch has beenadecade in the making for NASA. On Wednesday (May 27),aSpaceX Falcon9rocket is scheduled to rise from Pad 39A at NASA's Kennedy Space Center in Florida, sending astronauts Bob Behnken and Doug ...
Morgan Wallace, country music artist, arrested in Downtown Nashville
NASHVILLE, Tenn. — Just after 11 p.m. Saturday night, Metro officers saw Country Music artist Morgan C. Wallen being kicked out of Kid Rock's bar at 221 Broadway by bar security. According to the report by police, Wallen was kicked out for being disorderly ...
Outgoing acting director of national intelligence will also step down as US ambassador to Germany
Washington (CNN) Richard Grenell, who this week will leave his position as acting director of national intelligence, acknowledged on social media he will also step down from his other job as US Ambassador to Germany. The decision to resign his ...